नेपालबाट प्राप्त मुनाफा नेपालकै आर्थिक समृद्धिका लागि प्रयोग गर्छौं : सगुन
प्रकाशित मिति : भाद्र २१, २०७७ आईतबार
अमेरिकामा मुख्यालय रहेको सामाजिक सञ्जालमा आधारित इ–कमर्स कम्पनी, सगुन, ले कुनै पनि माध्यमबाट नेपाली पूंजी स्वदेश बाहिर नलैजाने स्पष्ट पारेको छ । सगुनले आइतबार आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनका क्रममा संस्थापक गोविन्द गिरीले सगुनप्रति न बुझेर शुरुमा केहि भ्रमहरु रहे पनि अहिले त्यो स्पष्ट भै सकेको बताए।
“हामीलाई आफ्नै भूमिमा एउटा प्लेटफर्म मात्रै चाहिएको हो, हामीले नेपालीबाट प्राप्त गरेको मुनाफा नेपालकै आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि प्रयोग गर्ने छौं। यसमा ढुक्क हुनुस्, नेपालबाट कमाएको सबै पैसा हामी नेपालमै रोजगारी र आर्थिक विकासका लागि प्रयोग गर्छौ“,” उनले भने।
पत्रकार सम्मेलनमा सगुनले विश्वभरका लगानीकर्ताहरुका लागि मिनी आइपीओमार्फत लगानी गर्न पुनः आह्वान गरेको छ । सगुनले साना लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्नका लागि कम आम्दानी भएकाहरुलाई समेत लगानीको वातावरण जुटाएको जनाएको छ ।
सगुनले “ग” श्रेणीको साधारण शेयर मिनि (आइपिओ) प्रतिकित्ता ३० डलरका दरले ३ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्रि गरिरहेको छ । आगामी सेप्टेम्बर ३० तारिख सम्म नेपाल, इरान र उत्तर कोरिया बाहेकका लगानीकर्ताले आइपिओ खरिद गर्न पाउनेछन् ।
कम्तिमा ३० कित्ता शेयर नौ सय डलरमा खरिद गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । सन् २०२१ को शुरुमा सेकेण्डरी आइपिओमा जाने रणनीति रहेकोले पनि मिनि आइपिओमार्फत लगानीको अवसर यही नै अन्तिम पटक हुने सगुनका सहसंस्थापक कविन सिटौलाले जनाए।
अहिले संसारभरि सगुनका प्रयोगकर्ताहरु ८१ लाख बढी रहेको सो कम्पनीले दावी गरेको छ ।
सगुनका ग्लोबल कोर्डिनेटर सूर्य गुरुङले लगानी गर्नासाथ प्रतिफल खोज्ने सोच होइन, भविष्यको लागि र सगुनको भिजनमा साथ दिने र विश्वास गर्ने सबै धन्यवादका पात्र भएको बताए । उनले सगुनको यात्रा धेरै अघि बढेको र यो यात्रामा कोही प्रवासी नेपाली पनि छुट्नुहुन्न भन्दै उनले विश्वभरका नेपालीसहित अन्य लगाीकर्तालाई समेत जोड्दै जाने बताए।
ब्लग के हो ? ब्लगबाट पैसा कसरी कमाउने?
– कमल धिताल के तपाई आफ्नो लेखलाई घर बसी–बसी कमाउने माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ ? त्यो
अमेरिकाका हरेक शहरमा ‘मलको’, डल्ले खुर्सानीको अचारदेखि टिमुरको छोपसम्म अनलाइनबाटै
अनलाइन स्टोर मलकोले अमेरिकाका हरेक शहरमा अनलाइनबाटै नेपाली उत्पादनहरु डेलिभरी सुरु गरेको छ । ७९
६८ सेकेन्डमै १ अर्ब डलरको सामान खरिद, अलिबाबा सपिङको उदघाटन टेलर स्वीफ्टबाट
चिनियाँ उपभोक्ताले एकै दिन सोमबार १ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान खरिद गरेका छन् । अलिबाबा
भदौ १५ देखि यतीको भरतपुर – पोखरा सिधा उडान, भाडा २५ सयमात्र
यती एयरलायन्सले यही भदौ १५ गतेदेखि भरतपुरबाट पोखरा सस्तो भाडादरमा सिधा उडान शुरु गर्ने भएको
इतिहासमै पहिलोपटक बाइडेनले अर्थमन्त्रीका लागि छाने महिला
विश्वास बढाउन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिहरु क्लीन्टन, ओबामा र बुसले सार्वजनिकरुपमा भ्याक्सिन लिने
७० बर्षपछि एरिजोनाबाट सिनेटका दुबै सिटमा डेमोक्र्याट्स, मार्क केलीले लिए सपथ
न्युयोर्क सिटीका सरकारी स्कुलमा पढ्ने एकलाख विद्यार्थी होमलेस